Saudi Arabia Oo Digniin Culus U Diray Ruushka Ka Hor Ciyaarta Furitaanka Koobka Adduunka – GOOL24.NET
Wadanka Saudi Arabia ayaa sheegay inay cabsi la’aan kula ciyaari doonaan waddanka Martigelinaya Koobka Adduunka ee Ruushka, marka ay galabnimada Khamiista iskaga hor yimaaddaann ciyaarta furitaanka.
Tababaraha xulka qaranka Saudi Arabia, Juan Antonio Pizzi, ayaa tibaaxay inay doonayaan inay garaacaaan Ruushka, diyaarna ay u yihiin iyagoon baqanaynin.
Ruushka oo martgelinaya Koobka Adduunka ayaa ka mid ah waddamada ugu liita qiimaynta FIFA ee billaha ah, waxayse iska hor imanayaan Saudi Arabia oo aan hal guul ah ka gaadhin ciyaaraha Koobka Adduunka tan iyo sannadkii 1994-kii, hase yeeshee tababaraha u dhashay Chile ee hadda wata Saudi Arabia, Pizzi ayaa ku dooday in ciyaartoygiisu ay ku guuleysan karayaan kulanka koowaad ee furitaanka.
“Hadafkayagu waa inaanu garaacno Ruushka. Diyaar baanu u nahay, mana baqanayno. Waxa noo qorshaysan inaanu hoggaanka yeelano, waxaananu isku deyi doonaa inaanu joojino Ruushka ” Sidaas ayuu yidhi tababare Pizzi.
Dhinaca kale, laacibka khadka dhexe ee xulka qaranka Ruushka, Aleksandr Samedov ayaa ciyaarta Saudi Arabia ku tilmaamay dhacdadii ugu weynayd noloshooda.
“Diyaar baanu nahay. Ciyaarta furitaanka ee koobka aanu martigelinayno, waxay tahay ciyaarta ugu weyn noloshayda, hubaashii. Waanu derisnay Saudi Arabia, waxa aanu ognahay inay jecel yihiin inay kubadda hayaan, waana koox farsamo, laakiin waanu helnay qorshihii aanu kaga guuleysan lahayn.” Sidaas ayuu yidhi Aleksandr Samedov.
Ciyaarta furitaanka ee Ruushka iyo Saudi Arabia ayaa bilaabmi doonta 6-da makhribnimo ee wakhtiga Geeska Afrika, waxaana si toos ah u baahin doona oo laga daawan doonaa shabakada ciyaaraha ee GOOL24.